Ku muuji dharka dhididka naqshadahaaga ugu fiican oo kor u qaad shaqadaada | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Design Graphic, Photoshop, Khayraadka
Sawir gacmeedyo dhididka leh naqshadahaaga ugu fiican oo ay maamushaa inay qabato dhammaan shaqooyinka garaafka ee a taageerada dharka taas ayaa ku caawin doonta sawiro naqshadahaaga si ka duwan. Sawir gacmeedku ma aha mid la mid ah sawirka ku saabsan taageerada dharka, waana sababta ay u fiicantahay in la arko shaqadayada dharka.
Sawirka dharkayaga ayaa ah wax aad u soo jiidasho leh fanaan kasta maxaa yeelay waan helnaa kor u qaad farshaxankeena hab shakhsi ahaaneed, waxaan sidoo kale isku dayi karnaa iibinno dharkeenna lagu muujiyey iyadoo la adeegsanayo noocan ah jeesjees taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah ugu darno naqshadaheena si macquul ah taageeradan.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah soo dejiso jees jees de Internet. Waxa ugu fiican ee ku saabsan shabakada ayaa ah inaan leenahay xariir aan dhammaad lahayn oo aan ku soo dejisan karno noocan oo kale ah, xaaladdan waxaan ku soo degsan doonnaa tan isku xirka
Marka aan furo our jees jees sweatshirt waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa fiirinta aagga lakabyo Photoshop. Aaggaan waxaan ka arki karnaa dhammaan midabada la heli karo loogu talagalay dhididkeena, oo leh mid fudud click waxaan ku guuleysanay inaan u bedelno midabka dharka qaab macquul ah.
para ku dabaq naqshadeena waa inaan siino laba jibbaar click lakabka koowaad (Naqshadayntaada halkan) markaad laba jibbaarayso click Daaqad cusub ayaa furi doonta.
Waxa xiga ee ah inaan sameyno si aan u aragno waxayaga naqshadeynta lagu dabaqay dhididkaan waa in loo gudbiyo qaabkeena daaqadan cusub. Waa inaan ogaanno taas jees jees waxay noo ogolaaneysaa inaan ku sameyno nooc kasta oo isbedel ah lakabkan, haddii aan rabno waxaan ku dari karnaa noocyada, noocyada isku hagaajinta, iwm. Ujeeddadu waa in la hagaajiyo qaabka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah si ay u ahaato sida aan dooneyno.
Markaan diyaarinayno naqshadeynta kaliya waa inaan siino in la keydiyo si loo soo bandhigo isbedelka lakabka asalka ah ee jeesjees.
Este jees jees waxaan u isticmaali karnaa sidii sawir gacmeed waayo markaan u aadno shaashadda daabacaadda dharkayaga, waxaan ku tusi karnaa sawir gacmeedkan dijitaalka ah dukaanka daabacaadda oo aan siin karnaa fikrad ah waxa aan raadineyno. Haddii aad tahay farshaxan jacayl u leh sawirka, ma seegi kartid fursadaha ay bixiyaan dunta dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sawir gacmeedyo dhididka leh naqshadahaaga ugu fiican
Soo duulaha, farshaxanka reer magaalka ah ee mosaics-ka pixelated ee aan la garanayn cida uu yahay